नम्रताको बोल्ड लुक्सदेखी गरुढ पुराणको डान्सिङ्ग कभरसम्मFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
नम्रताको बोल्ड लुक्सदेखी गरुढ पुराणको डान्सिङ्ग कभरसम्म
नम्रताले नजर खिच्दा
फिल्मी फण्डा । समय अनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्न सक्ने नायिकामा नम्रता श्र्ष्ठ पनि पर्छन् । फिल्म पिच्छे फरक प्रस्तुती र पात्र छनौट सँगै फिल्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा परह तरिकाले उपस्थित हुनु उनको विशेषता मानिन्छ । बुधवार राजधानीमा सम्पन्न भएको फिल्म प्रसादको प्रिमियरमा पनि उनले सबैको नजर खिच्न भ्याईन्।
वास्तवमा प्रिमियरको रेक कार्पेटमा क्रिम कलरको ग्राउनमा उपस्थित भएकी नम्रता बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुदाँ सबैको नजर खिचीएको थियो । उनी आफ्नो प्रेमी दावा शेर्पासँपै प्रिमियरमा सरिक भएपनि मिडियामा भन्ने उनी मात्रै छाईन् । सबैले प्रिमियर शुरुहुनुपूर्व उनको ड्रेसको प्रशंसा गरेका थिए । प्रिमियर पछि भने उनको अभिनयको तारिफ रहेको थियो । मिडिया सामु कमै देखिने गरेकी नम्रता बेला बखत यसरी विभिन्न कारण प्रस्तुत हुने र चर्चा रहने गरेकी छिन् ।
गीतमा नाच्दा ५० हजार पाउने
फिल्मी फण्डा । फिल्म गरुढ पुराणको गीतमा नाच्दा नगद रु पचास हजार पाउने भएको छ । फिल्मको म त पिरिम मा बोलको गीतमा नाचेर छनौट हुनेले पचास हजार नगद राशी पाउने भएको हो । फिल्मका निर्माण टिमले फिल्मको कभर गीतमा भिडियो प्रतिस्पर्धा आयोजना अन्तर्गत शो राशिको व्यवस्था गरिएको हो । मदानी क्रीएसनको सहकार्यमा गरिएको प्रतियोगिताको उत्कृष्ट नृत्यले नगद राशी सहित एउटा म्युजिक भिडियो र नृत्य समुहका सदस्यहरुको फोटो सेसनको अवसर लगायतका पुरस्कार पाउने चलचित्रका निर्देशक सुवास कोइरालाले बताएका छन् ।
प्रतियोगितामा भाग लिन एकल वा युगल वा सामुहिक रुपमा कभर भिडियो बनाएर क्रिएशन मदानी जिमेलमा पठाउनु पर्नेछ । उपलब्ध भिडियोहरु मदानी क्रीएसनको युटुब च्यानलमा अपलोड गरिने क्रीएसनका सिइओ बिष्णुकान्त घिमिरेले बताएका हुन् । दिनेस राउतको शब्द रहेको गीत ’म त पितिममा’ मा कोसिस क्षेत्री र मनिशा पोख्रेलको स्वर रहेको छ भने रेनशा बान्तवा राइले कोरियोग्राफी गरेकी छिन । चलचित्र माघ ४ गते देशब्यापी प्रदर्शनमा आउनेछ ।
फिल्म ‘प्रसाद’को प्रिमियर शोमा जे देखियो (फोटो फिचर)
सिम्बाको ‘आँख मारे’ सार्वजनिक (गीत)
फिल्मी फण्डा । हालै विवाह बन्धनमा बाँधिएका नायक रणवीर सिंह अभिनित फिल्म सिम्बाको पहिलो गीत आँख मारे सार्वजनिक भएको छ । गीतमा रणवीरसँगै सारा अलि खानलाई फिर्चड गरिएको छ । जसमा यी दुईलाई डान्सिङ मुडमा देख्न सकिन्छ । गीतमा नेहा कक्र, मिका सिंह र कुमार सिहंको स्वर, तन्सि बाग्चीको संगीत, र शविर अहमेदको शब्द रहेको छ । फिल्म ‘सिम्बा’ तेलुगूमा बनेको फिल्म ’टेम्पर’ को हिन्दी रिमेक फिल्म हो । जसलाई रोहित शेट्टीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म आउँदो डिसेम्बर २८ मा रिलिज हुदैछ ।
सारिका र टंकको रातो गल्बन्दी (गीत)
फिल्मी फण्डा । नायिका तथा गायिका सारिका घिमिरे र गायक तथा सङ्गीतकार टंक बुढाथोकीको स्वरमा ‘रातो गल्बन्दी मैले भिरेको, तिमले इशारा सुहाको गरेको’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा यमनाथ मैनालीको शब्द, टंक बुढाथोकीको सङ्गीत रहेको छ । गीतको भिडीयोमा सुनिल क्षेत्रीको निर्देशन तथा कोरियोग्राफी रहेको छ भने भिडियोमा सुनिलसँगै अलिशा शर्मा, नेपाली ठिटोज र गायक गायिका फिचरिङ छन् । गीतको भिडीयोमा बुद्ध थापाको छायाँकन र विकाश ज्ञवालीको सम्पादन रहेको छ ।
गीत गजलको इन्डक्ल्याप
फिल्मी फण्डा । फिल्म गीत गजलको सुटिङ्ग सकिएको छ । नितीन चन्द निर्देशित यस फिल्मको छायांकन ३५ दिनमा सकिएको हो । आरोहण प्रोडक्सन प्रा. लीको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्ममा रुप पोखरेल, आरोही सिंह, रश्मी भट्ट, विशाल पहाडी, भिमा मैनाली लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । आरोहण क्षेत्रीले निर्माण गरेको यस फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको संगीत, बाबु श्रेष्ठको छायांकन, र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ । फिल्ममा रहेको मभ्ये एउटा गीत बाहेक फिल्मको सम्पूर्ण छायांकन सकिएको फिल्म युनिटले जानकारी गराएका छन् ।